Ciise wuu nool yahay! , Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Haddii aad dooran lahayd keliya hal marin oo soo koobaya noloshaada masiixiga oo dhan, midkee ayaa noqon lahayd? Malaha aayaddan aadka loo soo xigtay: "Ilaah intuu dunida jeclaaday, wuxuu siiyay wiilkiisa keliya oo dhashay, sidaa darteed in kuwa isaga rumaystaa aysan lumin, laakiinse ay lahaadaan nolosha weligeed ah?" (Yooxanaa 3:16). Doorasho wanaagsan! Aniga ahaan, aayadda soo socota waa tan ugu muhiimsan ee Kitaabka Quduuska ah ay tahay inuu fahmo gebi ahaanba: «Maalintaas waxaad garan doontaan inaan anigu aabbahay ku jiro, adiguna idinku dhex jirtaan, anna aan idinku jiro) (Yooxanaa 14,20).
Habeenkii ka hor dhimashadiisa, ciise ma ahan oo keliya inuu xertiisii ​​u sheegay in "maalintaas" la siin doono Ruuxa Quduuska ah, laakiin wuxuu sidoo kale ka hadlay dhowr jeer waxa ku dhici doona dhimashadiisa, sarakiciddiisa, iyo u dabbaaldegaan. Wax aad u yaab leh ayaa loo malaynayaa inay dhacaan, wax aad u yaab badan, wax aad u xun oo aan u muuqanayn inay suurogal ahayn. Maxay saddexdaan jumlado yar yar na barayaan?
Ma ogtahay in Ciise ku jiro aabihiis?
Iyada oo loo marayo Ruuxa Quduuska ah, Ciise wuxuu ku nool yahay xiriir dhow, gaar ah oo xiriir aad u gaar ah la leh aabihiis. Ciise wuxuu ku nool yahay dhabta aabihiis! "Cidna weligiis ma arkin Ilaah; kan u dhashay Ilaah iyo aabaha aabihiis ayaa ku dhawaaqay" (Yooxanaa 1,18). Aqoonyahan ayaa qorey: «Inaad ku jirtid dhabta dhabta ah ee qofka waxaa loola jeedaa inaad ku jirto qof kale gacmihiisa, inaad qof ka buuxisid daryeelka ugu dhow iyo daryeelka jecel. Ciise waa ku habboon yahay halkan: "Wuxuu ku jiraa dhabta aabihiis jannada ku jira".
Ma ogtahay inaad ku jirtid ciise?
"Adiga ayaa igu jira!" Saddex erey oo naxdin leh. Aaway Ciisena Waxaan hadda ogaanay inuu ku nool yahay xiriir dhab ah oo farxad leh oo uu la leeyahay Aabbihiis jannada ku jira. Haddana Ciise wuxuu yidhi innaguna isagaynu ku nahay, sida geedka canabka ah ay canabka ku dhex jiraan (Yooxanaa 15,1-8). Ma fahantay waxa taasi micnaheedu yahay? Waxaan nahay xiriir la mid ah kii Ciise uu la lahaa aabihiis. Dibedda ugama daawano iskuna dayno inaan ogaano sida aan uga mid noqon karno xiriirkan gaarka ah. Waxaan qayb ka nahay. Waa maxay waxaas oo dhan? Sidee ayay wax walba ku dhaceen? Aynu wax yar eegno
Istaalku wuxuu ina xusuusiyaa sanad walba dhimashada, aasitaanka iyo sarakicista Ciise Masiix. Laakiin tan kaliya maaha sheekada Ciise, laakiin sidoo kale sheekadaada! Waa sheekada midkastaba maxaa yeelay Ciise wuxuu ahaa kuweenna bedelkiisa. Markuu dhintey, kulligeen waan la dhimannay isaga. Markii la aasay, dhammaanteen isaga ayaa la aasay. Markuu u soo noolaaday nolol cusub oo cajiib ah, dhammaanteen waxaan u nimid nolosha (Rooma 6,3-14). Muxuu Ciise u dhintay? Maxaa yeelay, Masiixba mar buu u xanuunsaday dembiyada, waana kii xaqdaran, oo sidaasuu Ilaah idiinku hoggaamiyey, oo jidhka waa laydinku dilay, laakiinse Ruuxa ayaa loo nooleeyaa sida Ruuxa ku jirta. (1 Butros 3,18).
Nasiib darrose, dad badani waxay u maleeyaan Ilaah inuu yahay nin oday ah oo cidlo ah oo ku nool meel jannada ku jira oo naga fiirinaya meel fog. Laakiin Ciise wuxuu ina tusayaa sida saxda ah ee ka soo horjeedda. Jacaylkiisa weyn aawadood, Ciise ayaa inagu mideeyey naftiisa oo wuxuu nagu keenay Aabbaha hortiisa xagga Ruuxa Quduuska ah. "Oo markaan u tago inaan diyaarsado meeshaada, waxaan rabaa inaan soo noqdo oo aan ku qaato si aad adiguna meeshaan joogtid u joogtid" (Yooxanaa 14,3). Miyaad aragtay inaysan xusin inay tahay inaan sameyno ama sameyno wax uun si aan u soo galno hortiisa? Maaha in la raaco xeerarka iyo qawaaniinta si loo hubiyo inaan ku fiicanahay. Waxaan horeyba u nahay: “Isagaa kor inoogu qaaday oo jannada ina geliyay Ciise Masiix” (Efesos 2,6). Xiriirkan gaarka ah, gaarka ah ee u gaarka ah ee Ciise uu Aabbaha la leeyahay xagga Ruuxa Quduuska ah weligiis wuxuu noqday mid qof walba u heli kara. Iyagu hadda waxay aad ugu dhow yihiin Ilaah sida ay yihiin, Ciisena wuxuu ka dhigay cilaaqaadka saaxibtinimo.
Miyaad garanaysaa inuu Ciise idinku jiro?
Noloshu waa u qiimo badan tahay tan aad weligaa qiyaasi karto! Kaliya ma aha inaad adigu ku dhexjirto Ciise, laakiin isaguna wuu kugu dhex jiraa. Wuu ku faafayaa gudahaaga wuuna ku dhex nool yahay. Waxay joogtaa nolol maalmeedkaaga, qalbigaaga, fikradahaaga iyo xiriiradaada. Ciise qaadataa qaab ee aad (Galatiya 4:19). Markaad soo maray xilliyada adag, Ciise wuu dhexgalayaa adiga iyo adigaba. Isagu waa xoogga kugu jira markii aad dhibaato ku jirto. Isagu waa midnimo, daciifnimo iyo nugul midkeen kasta oo ka mid ah waana ku faraxsanahay in xooggiisa, farxadiisa, samirkiisa, is cafinta la muujiyo annaga ayayna ku tusaysaa dadka kale. Bawlos wuxuu yidhi: "Masiixu waa noloshayda, dhimashaduna waa faa'idadayda" (Filiboy 1,21). Runtu sidoo kale adiga way ku qusaysaa: Isagu waa noloshaada, sidaas darteedna way u qalantaa inaad iska dhiibto. Aamin aamin inuu isagu isagu isagu ku jiro.
Ciise wuu kugu jiraa adiguna waad ku jirtaa isaga! Waxaad ku jirtaa jawigan halkaasna waxaad kaheli doontaa nal, nolol iyo cunno ku xoojin doona. Jawigaani sidoo kale adigaa ku jira, iyada la'aanteed ma jiri kartid oo waad dhiman lahayd. Waxaan ku jirnaa Ciise isaguna isagaa nagu jira. Waa jawigayaga, nolosheena oo dhan.
Salaadda wadaadka sare, Ciise wuxuu si gaar ah u sharraxayaa midnimadan. Waxaan u isdaahiriyaa naftooda si iyaga qudhoodu ay quduus uga dhigi karaan runta. Aniga umaan baryi maayo iyaga kaliya, laakiin sidoo kale kuwa kuwa aniga igu rumaystaa eraygooda in iyagu isku mid yihiin. Haddaad adigu igu jirtid, anna aan adiga kugu jiro, iyaguna waa nagu dhex jiraan, in dunidu rumaysato inaad i soo dirtay, oo aan iyaga ku ammaanay ammaantaad i siisay, inay mid ahaadaan, oo la mid ah anagu mid baan nahay, aniga ayaa ku jira, adiguna anigaad igu dhex jirtaa, inay iyagu si buuxda u wada noqdaan oo ay aqoonsadaan dunida aad i soo dirtay oo aad u jeclaatay iyaga sida aad aniga u jeceshahay ” (Yooxanaa 17,19-23).
Akhristaha qaaliga ahow, miyaad aqoonsantahay midnimadaada Ilaah iyo midnimada Ilaah ee kugu dhex jirta? Tani waa sirtaada ugu weyn iyo hadiyadaada. Soo celi jacaylka aad u qabtid Ilaah mahadnaqiddiisa!